1500 Ruux Oo Tahriibayaal Ah oo la laayahay iyo Ciidamada Talyaaniga oo Shaaciyay Baadigoobka loogu jiray Meel ay jaan iyo Cidhib dhigeen. - Haldoor News | Haldoor News
1500 Ruux Oo Tahriibayaal Ah oo la laayahay iyo Ciidamada Talyaaniga oo Shaaciyay Baadigoobka loogu jiray Meel ay jaan iyo Cidhib dhigeen.
Roma (Haldoornews)-Maraakiib ay wataan ciidamada Illaalada xeebaha ee Talyaaniga, iyo markab ay leeyihiin ciidamada Badda Norway, ayaa saacado ka hor badda u dhaxaysa dalalka Libya iyo Talyaaniga ka soo badbaadiyay tahriibayaal ay tiradoodu kor u dhaaftay 1500, oo qof, waxaana weli socda hawl-galo lagu baadi goobayo samata bixinta tiro kale oo intaa le’eg oo weli la la’ yahay.
Tahriibayaashan maanta badda laga soo badbaadiyay ayaa saarnaa Shan doonyood oo yar yar oo caag ka samaysan oo qarka u saarnaa in ay qaraqmaan, ayaa lagu soo waramayaa in ay ka mid ahaayeen ugu yaraan 18 doonyood oo yar yar oo ay saarnaayeen Seddex kun oo
qof oo tahriibayaal ah, kuwaas oo qeylo dhaan samata-bixin ah u dirtay ciidamada illaalada xeebaha Talyaaniga.
Dad muhaajiriin tahriibayaal ah oo ay tiradoodu kor u dhaaftay 17 kun oo qof, oo ka soo haajiray bariga dhexe iyo Afrika, ayaa soo gaadhay xeebaha koonfureed ee dalka Talyaaniga sannadkii 2014-ki, kuwaas oo laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka
Sannadkan gudihiisa waxa ku dhintay badda u dhaxaysa Libya, iyo Talyaaniga, dad tahriibayaal oo isku dayayay in soo gaadhaan Yurub.